दशैंमाथि समाजशास्त्रीय दृष्टि
पुराण र धर्मशास्त्र अनुसार दशैंको साइनो हिन्दूधर्मसँग जोडिए पनि आधुनिक नेपाली समाजमा यसलाई मनाउने र मान्ने संस्कृतिमा व्यापक फेरबदल भएको छ । दैत्य र आसुरीभावमाथि देवताको विजय भएकाले मनाउने गरेको दशैंले आजको समयसम्म आइपुग्दा केवल समाजमा बसोबास गर्ने मानिसहरुले पाउने आर्थिक, सामाजिक लाभसँग बढी घनिष्टतम सम्बन्ध जोडिसकेको छ । त्यसकारण दशैं पहिले किन मनाइन्थ्यो भन्ने प्रश्नको उत्तरभन्दा हामीलाई अहिले किन मनाइन्छ भन्ने प्रश्नको उत्तर दिन सजिलो भएको छ । हामी सहजरुपमा भन्ने गर्छौँ – दशैं आम्दानीको पर्व हो । टीकाटाला हुने भएर मात्रै नभई बजारमा हुने सामानहरुको खरिदबिक्री र कारोबारको दृष्टिकोणले पनि दशैंलाई हामी आम्दानीको पर्व भनेर चिन्न थालेका छौँ । त्यस्तै दशैं अहिले भेटघाटको पर्व बनेको छ । आधुनिक व्यस्त समय र समाजमा हामी वर्षको एक दिन दशैंकै निहुँमा आफन्तहरुसँग भेटघाट गर्न पाउँछौँ । वर्षौँसम्म आफ्नो कामधाममा व्यस्त मानिसहरुलाई आफन्त र साथीभाइसँग भेटघाट गर्ने अवसर जुराइदिने भएकाले पनि दशैंको नेपाली समाजमा विशेष महत्व छ । यतिमात्र हैन, गाउँबाट सहरमा पढ्न होस् या कमाउन पुगेकाहरु पनि वर्षकै एक दिन भए पनि घर फर्किन्छन् यो समयमा भने विदेशिएकाहरु समेत दशैंकै निहुँ गरी घर आउँछन् । यसको अदृश्य फाइदा भनेको समाजमा बसोबास गर्ने मानिसहरुबीच एकताभाव, मित्रताभाव आदानप्रदान गर्ने र निकटमा बाँधिरहने धागोकै रुपमा दशैं विकसित भएको छ । जब समाजमा मानिसहरु निकट सम्बन्ध बनाएर साझा पर्वको रुपमा दशैं मनाउँछन्, तब देशभित्र पनि शान्ति र सद्भावका अनेक रुपहरु देखिन्छन् । यसरी समाज समाज मात्र नभई पूरै देशमा दशैंले शक्तिशाली सम्बन्धको सञ्चार गराउँदै आएको छ । गाउँ समाज, सहरबजारमा बसोबास गर्ने मानिसहरुलाई दशैंले एकताको धेरै कसिलो डोरीले बाँधेको हुन्छ ।
गाउँघरबाट मानिसहरु दशैंको किनमेल गर्नकै लागि भनेर वर्षको एकपटक भए पनि नयाँ लुगा लाउने र मिठो खाने रहरले सहरबजारमा आई किनमेल गर्छन् भने सहरबजारमा यतिबेला छुट्टै चहलपहल हुन्छ । भीडभाड हुन्छ । वर्षभरि दुःख गरेर कमाएको पैसा बजारमा विनिमय हुन्छ भने व्यापारी, व्यवसायीहरुको व्यवसायले पनि राम्रो आर्थिक लाभ हासिल गर्छ । त्यसको दशैंको समाजशास्त्र व्यापक रुपमा रहेको छ भन्नुपर्ने हुन्छ । सरसफाइ मानिसहरुको लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो भने दशैंको बेला गाउँ होस् या सहर सबै चिरिच्याट्ट पारिएको हुन्छ । घरमा पाहुना आउँछन् भनेर मानिसहरु आँगन सफा राख्ने, गमलामा फूल रोप्नेदेखि घरकै मर्मतसम्भारका कामहरु समेत दशैंकै अगाडि गरिसक्छन् । यसको कारण यही पर्व नै हो । दशैं भाखामा ऋण लिने र तिर्नेहरु हुन्छन् । समाजमा विभिन्न उपहार राखेर रमाइलोका लागि चिठा खेल्ने प्रचलन विकसित भएको छ दशैंलाई नै लक्षित गरी भने विभिन्न वस्तुका बिक्रेता कम्पनीहरुले आफ्ना आफ्ना सरसामानहरु किनबेच गर्दा उपहारको व्यवस्था गरेका हुन्छन् दशैंमा विशेष छुटमा लिन सकिने गरी । देखिने गरी भन्दा निधारको रातो टीका र कानमा सिहुरेको पहेँलो जमरा दशैंको चिनारी भए पनि समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा दशैं बहुपक्षबाट मानिसले आर्जन गर्ने लाभको कारण बनेको छ ।
मानिसलाई एकताभावमा बाँध्ने होस् कि धेरैभन्दा धेरै आम्दानी गरिदिने होस्, दशैं नै त्यसको कारण बन्ने गर्छ । घरपरिवारको नियास्रो मेटाइदिने मात्र नभई दशैंले मानिसहरुमा खुसीको सञ्चार गरिदिन्छ । भेटघाट गरिदिन्छ । आम्दानी गरिदिन्छ । आर्थिक लाभ प्राप्त हुन्छ । दशैंकै कारण एउटा व्यवसायीले आम्दानी गर्छ भने वर्षभरि काममा व्यस्त मानिसले फुर्सद पाउँछ । दशैंकै कारण कामवश छिन्नभिन्न भएर छुट्टिएर रहेको परिवार समेत एक हुन्छ भने वर्षौँदेखि नभेटिएका साथीहरुसँग भेटघाट हुन्छ । मानिसहरुलाई मामाघर, ससुराली, माइत जाने अवसर जुराइदिने यो दशैं साँच्चै सामाजिक दृष्टिकोणले हेर्दा असाध्यै उमंग र उत्साह सञ्चार गर्ने पर्व हो भन्न सकिन्छ । यस पर्वमा यहाँहरु पनि आत्मीयता साटी खुसीसाथ मनाउनुहोला । दुर्गा भवानीले सबैको कल्याण गरुन्, विजयादशमीको शुभकामना ! (आर्थिक दैनिकबाट)
बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाअन्र्तगत नदीजन्य पदार्थको सङ्कलनमा देखिएको कानूनी जटिलता अन्त्य भएको छैन । नदी तथा...
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले सङ्घीयताअनुसार पार्टीको विधानलाई परिमार्जन गर्न बोलाएको महासमिति...
शोकमग्न छन् शम्शेरगञ्जवासी
विवाहको जिप दुर्घटनामा परी बेहुलाका बाबु–आमासहित छ जनाको ज्यान गएपछि बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका–८...
नागरिकता विधेयक–२०७५ स्थगित गर्न माग
तुइनबाटै तारिन्छ सवारी साधन
चार महिनामै वार्षिक लक्ष्यभन्दा बढी राजश्व सङ्कलन
पुस्तक समीक्षाः ‘ह्युमन राइट्स ह्युमन रङ्स’
अमरगढी किल्लाका हतियार बेपत्ता
ब्रह्मदेव बजार–टनकपुर बाँध नजिकको सडक कालोपत्रे हुँदै
लेखु सहयात्रीको ‘लालटिन बालेर’ सार्वजानिक ! (भिडियोसहित)
पछिल्लो समय सांगीतिक क्षेत्रमा चर्चामा रहेका लेखु सहयात्रीले ‘लालटिन बालेर’ बोलको गीत सार्वजानिक गरेका छन् ।...
नेपाली चलचित्र मदहोस को ‘दिलको पिजडा’ गीतको लिरिकल भिडियो सार्वजनिक